I-Princess Beatrice inokufudukela e-Nottingham Cottage eKensington Palace - Indumasi
Eyona Indumasi I-Princess Beatrice inokuHamba iye eHarry naseMeghan kwikhaya langaphambili leNdlu yaseKensington
I-Princess Beatrice inokuHamba iye eHarry naseMeghan kwikhaya langaphambili leNdlu yaseKensington
UPrincess Beatrice kunye no-Edoardo Mapelli Mozzi banokufudukela eNottingham Cottage.UBenjamin Wheeler ngokusebenzisa imifanekiso kaGetty
Inkomfa yezempilo yejp morgan 2020
Ibe lihlobo elixakekileyo lePrincess Beatrice. Ngelixa izicwangciso zakhe zokuqala zomtshato kuye kwafuneka zichithwe ngenxa yobhubhane we-coronavirus, yena no-Edoardo Mapelli Mozzi bagqibela ngokutshata emfihlakalweni, emtshatweni wentlalo e-Windsor castle, kunye no-Queen Elizabeth kunye neNkosana uPhilip.
Abasandul 'ukutshata emva koko baqala iholide yasemva komtshato encinci e-France, kwaye ngoku kuthiwa bayaqhubeka nokubaleka kunxweme lwe-Amalfi.
BONA KWAKHO: INkosana uWilliam kunye noHarry baya kutyhila umfanekiso oqingqiweyo kwi-Princess Diana's Honor Year I-Nottingham Cottage ilungile kufutshane ne-Ivy Cottage, apho kuhlala khona uPrincess Eugenie.Imifanekiso kaChris Jackson / Getty
Kwaye xa bebuyela e-United Kingdom, i-duo esandul 'ukutshata isenokufudukela eKensington Palace, ngokweengcali zasebukhosini Mholweni .
Ngokwentengiso, uPrincess Beatrice kunye no-Edoardo banokufudukela e-Nottingham Cottage, ebekwe kanye kwibhotwe laseLondon. Ikhaya elinamagumbi okulala amabini yenye yezona ndawo zincinci zihlala eKP, kodwa liza nomnombo wasebukhosini.
INkosana uHarry kunye noMeghan Markle ngabona bantu bangoku nje baseNottingham Cottage, nangona befudukele eFrogmore Cottage emva konyaka ongaphantsi. Benze intshukumo enkulu nangakumbi ngeli xesha, kuba ngoku bahlala kwindlu enamagumbi okulala ayi-16 eMontecito eCalifornia. INkosana uHarry kunye noMeghan Markle bahlala eNottingham Cottage kunye ixesha elingaphantsi konyaka.Karwai Tang / WireImage
INkosana uHarry yayihlala e-Nott Cott ngeentsuku zakhe zokuthwala, nayo, kwaye ngaphambi koko, yayilikhaya kwiNkosana uWilliam noKate Middleton. Kukho amagumbi amabini okwamkela ekhaya, kunye negumbi lokuhlambela kunye negadi encinci.
Ngoku ukuba i-cottage yaseLondon ebukekayo i-1,324-square-foot ihleli ingenanto, iyavakala loo nto U-Queen Elizabeth wayenokunikela umzukulwana wakhe kunye nomzukulwana omtsha ukusetyenziswa kwepropathi. I-Nottingham Cottage ikwenzeka ukuba ibe ngamanyathelo nje kude ne-Ivy Cottage, apho udadewabo kaPrincess Beatrice, uPrincess Eugenie, ahlala khona nomyeni wakhe, uJack Brooksbank. INkosana uWilliam noKate babehlala eNottingham Cottage, nangona kunjalo sele befudukele kwigumbi eliqhekekileyo ngaphakathi kweKensington Palace.Iphuli / Samir Hussein / WireImage
UPrincess Beatrice ebehlala endlwini yakhe kunye nePrincess Eugenie yexesha elide eSt.James's Palace eLondon, nangona yena no-Edoardo bebechitha bodwa kwikhaya losapho oluseCotswolds, ngaphambi kokuya eWindsor castle ngomtshato wabo onamaphupha.
Ukuba uBeatrice noEdoardo bafudukela eNottingham Cottage, baya kuba nabamelwane abambalwa abasebukhosini. Ngaphandle kweNkosazana u-Eugenie, baya kuhlala kufutshane nje ukusuka ePrince William naseKensington Palace, apho iiCambridge zibikwa zibuyele khona phambi kokuba abantwana babo baqale isikolo ngoSeptemba.
'Isibini esingaqhelekanga' siya kwiFlethi, IsiQalo esingafunekiyo
Ngaba uRodgers uChristie VP?
Ijezi-Entsha Yezopolitiko 2021
Dibana noPhando lwePlastiki osasaza iinkqubo kwi-Snapchat
Yintoni iKhowudi yokunxiba yoMtshato kaMeghan Markle kunye neNkosana uHarry?
'Umdlalo weZihlalo zobukhosi' Ithiyori Tracker: Ixesha lethu elilelona liXhalabileyo 8 Uqikelelo lwePloti
Ndithathe intombi yam ndaya e-White Castle ngoSuku lweValentine
Amava Akhuselekileyo Ekhaya
I-Sickos kwi-Sofa: Umthetho kunye ne-Order: I-SVU's Iminyaka eli-13 yokuZisa ulwaphulo-mthetho ngokwesondo kwiXesha eliyiNtloko
Isandi seGorillaz isandi seTrumpocalypse kwi 'Humanz'
Kutheni iiMovie zeShark zizinto ezinokuthenjwa kwiBhokisi yeeOfisi zebhokisi: Ukuntywila okunzulu
Yintoni iMilinganiselo yeDisney + yeeNdalo eziNtathu eziKhulu eziQhelekileyo eziJongeka ngoku
'Ngcono ubize uSawule' 2 × 07 Ukuphindaphinda: Zilungiselele
I-WSJ ithi ii-Sauna ze-infrared azikuncedisi kwi-Detox-Izifundo azivumelani
colin farrell kumarhamncwa amnandi
iofisi eshiya i-netflix 2017
Ngubani owaye gustavo fring kwi chile
khangela iinombolo zefowuni ngamagama
ukubulawa komntu okrexayo